Khayre “Sababta ay u yaraadeen Qaraxyadii ka dhici jiray Muqdishu waa dadaal ay sameeyeen ciidanka” – Balcad.com Teyteyleey
Khayre “Sababta ay u yaraadeen Qaraxyadii ka dhici jiray Muqdishu waa dadaal ay sameeyeen ciidanka”
By Abdihakin Yousuf	 On Jul 30, 2017
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa shalay booqday xero ay ku jiraan ciidanka howlgalka xaslinta Caasimadda.
Booqashada ayaa waxaa ku wehlinayay xubno ka tirsan golayaasha dowladda Soomaaliya, waxaana ciidanka ay ugu tageen sidii ay u dhiiragelin lahaayeen.
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xusay in rajada umadda Soomaaliyeed ay yihiin ciidanka.
“Sababta aan idin kugu imid waa in aan idin kaga tacsiyeeyo dhibkii idinku dhacay oo aan idin sheego sababta hal bil ka badan uu qarax ugu dhicin magaalladda sidoo kale sababta ay u yaraatay dadkii la leyn jirey, sababta amni iyo kala dambeyn loo helay, waa shaqadda aad idinka qabateen,” ayuu yiri RW Kheyre.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa tilmaamay in Al-shabaab ay yihiin cadowga ummadda Soomaaliyeed maadaama aysan kala sooceynin oo isku si u dilaan marka ay weerar ku qaadaan goobaha dadweynaha ay u badanyihiin sida Hotelada oo kale. Ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Mudo bil ka badan ayaa magaalladda Muqdishu waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidanka xaslinta Caasimadda, waxaana lagu arkayaa inta badan isgooysyada magaalladda Muqdisho.
Madaxda dowladda iyo shacabka qaar kamid ah ayaa aad u amaanay howlgalka, waxaana intii lagu guda jiray bishii Ramadan ay wadeen howlgallo hubka lagu baariyay.
Dhinaca kale 27-kii bishan July Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in ay jiraan, dad haddii boqol shey oo wanaaga ah la sameeyo aan ka hadleynin oo wax yar haddii ay dhacaan si xun u fasiraya, sida hadalka uu u dhigay.
“Waxaa jira dad mas’uuliyiin ah oo qaarkood ku jira dowladda oo dhararsanaya magaalladda Muqdishu in ay wax ka dhacaan oo dhahaya maanta magaalladda Qarax kama dhicin, dad laguma dilin. Waxey wal-wal iyo deg-deg u qabaan in magaalladda dhibaato, shil iyo gumaad uu ka dhaco
The post Khayre “Sababta ay u yaraadeen Qaraxyadii ka dhici jiray Muqdishu waa dadaal ay sameeyeen ciidanka” appeared first on Ilwareed Online.
DEGDEG: Qarax goor dhow ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho